Home Wararka Khayre oo Dekado muhiim ah ku wareejinayo Dowlada Qadar
Khayre oo Dekado muhiim ah ku wareejinayo Dowlada Qadar
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay Wafdi ka socda dowladda Qadar, kuwaasoo soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Wafdiggaan ayaa sababta ay u yimaadeen Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tahay sidii ay Maalgashi ugu sameysan lahaayeen Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa soo dhaweeyay Wafdiga, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay in ay la shaqeyso cid walba oo dooneyso in ay caawiso Soomaaliya.
Dowladda Qadar ayaa dooneyso in ay maalgashi ku sameysato Dekeddaha Soomaaliya.
Dowladda Qadar ayaa hadda kusoo biirtay Loolanka loogu jiro Dekeddaha Soomaaliya.
Previous articleFarmaajo oo ku Amray Yariisow inuu iscasilo Ama bur buriyo goobo Ganacsi
Next articleMooshin ka dhan ah kheyre oo Qal Qaaladiisa Si Xowli ah uga Socoto Magaalada Nairobi
Dadka Ku Dhaqan Gobolka Hiiran oo Loga Digay In Ay u...
Doorasho dhibaato dabataal oo Maanta lagu qaban doono Magalada Dhuusa-mareeb...